दिनहुँ १० बालबालिका हराउँछन, आधा फेला पर्दैनन् « रिपोर्टर्स नेपाल
दिनहुँ १० बालबालिका हराउँछन, आधा फेला पर्दैनन्
प्रकाशित मिति : 2021 April 6, 8:37 am
काठमाडौं, चैत २४ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा मात्रै २ हजार ३ सय ८८ बालबालिका हराएका छन् । तीमध्ये १ हजार १ सय ६९ बालबालिका अझै हराइरहेका छन् । यो तथ्यांकअनुसार दिनहुँ औसतमा झन्डै दस जना बालबालिका हराउँछन्, जसमध्ये करिब आधा फेला पर्दैनन् ।
प्रदेश २ बाटै साउनयताको ८ महिनामा ५ सय ३३ बालिकासहित ६ सय १२ बालबालिका हराएका छन् । परिषद्का अनुसार ७ प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बालबालिका हराउनेमा प्रदेश २ अगाडि छ, जहाँ अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै (८७ प्रतिशत) बालिका मात्रै छन् । हराएकामध्ये २ सय २१ बालिका भेटिए पनि ३ सय १२ को अत्तोपत्तो छैन ।
प्रदेशगत तथ्यांक केलाउँदा प्रदेश २ पछि सबै भन्दा धेरै बालबालिका वाग्मती प्रदेशबाट हराएको देखिन्छ । वाग्मतीबाट ४ सय ५२ बालबालिका हराएका छन् भने प्रदेश १ बाट २ सय ९९, गण्डकीबाट ३ सय १०, लुम्बिनीबाट २ सय ८६, सुदूर पश्चिमबाट २ सय ३ र कर्णालीबाट १ सय २६ बालबालिका हराएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
भौतिकमा २० लाखका १८ सय टुक्रे योजना, प्रदेशमा पठाउन माग
काठमाडौं, जेठ २९ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि
बुढीगंगा नगरपालिकामा न मतगणना न निर्वाचन
काठमाडौं, जेठ २९ । बुढीगंगा नगरपालिकामा मतदान हुने कि मतगणना हुने भन्ने अन्योल कायमै छ।
संविधान विपरित इम्बोस्ड नम्बर लेखिने व्यवस्था राष्ट्रघात: वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भट्टराई
काठमाडौं, २९ जेठ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. टीकाराम भट्टराईले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राष्ट्रघात भएको टिप्पणी
दलहरूले बालेन साहलाई मनोबल गिराएर राजीनामा गराउन चाहेका थिएः डा. सुन्दरमणि दीक्षित
रेल सञ्चालनपछि जनकपुरमा भारतीय पर्यटकको ओइरो
जनकपुर, जेठ २९ । रेल सेवा सञ्चालन भएसँगै जनकपुरधाममा भारतीय पर्यटकको चहलपहल बढेको छ ।
एक व्यक्ति दुई कार्यालयका प्रमुख
काठमाडौं, जेठ २९ । एकै व्यक्ति दुईवटा छुट्टा–छुट्टै जिल्लाको कार्यालय प्रमुख हुँदा दुवै जिल्लाका सेवाग्राही